माइ नम्बर कार्डः कार्ड एक फाइदा अनेक | Nepali In Japan
माइ नम्बर कार्डः कार्ड एक फाइदा अनेक
तपाई जापानमा बसोबास गर्नु हुन्छ ? तपाईको साथमा माइ नम्बर कार्ड छ ? माइन नम्बर कार्ड लियो भने बढी कर तिर्नु पर्छ, भिसा आवेदन दिने बेलामा गाह्रो हुन्छ भन्ने गलत बुझाईका कारण कार्ड नबनाउने चलन देखिएको छ ।
तर यो कार्डका अनेक फाइदा छन् । यही एउटा कार्डबाट तपाईले धेरै काम गर्न सक्नु हुन्छ । माइ नम्बर कार्डलाई बीमा कार्ड, चालक अनुमति पत्र जस्ता महत्वपूर्ण कागजपत्रहरुमा समावेश गर्ने व्यवस्था गत वर्षबाट शुरु भइसकेको छ । एउटै कार्ड बोकेपछि अन्य कार्ड बोक्नु पर्ने झन्झट पनि हटेको छ ।
चालक अनुमति पत्रलाई पनि माइ नम्बरमा दर्ता गरेर त्यसैले चालक अनुमति पत्रको काम गर्ने प्रक्रिया पनि अगाडि बढेको छ ।
यो कार्ड छ भने आवास तथा परिवार दर्ता प्रमाण पत्र जस्ता आधिकारिक कागजपत्रहरु तपाई आफैंले कन्भेनियन्स स्टोरबाट प्रिन्ट गराउन सक्नु हुनेछ । अझै महत्वपूर्ण कुरा विदेशीहरुले कोभिड विरुद्ध खोप लगाएको प्रमाण पत्र लिन र भिसा नवीकरण पनि अनलाइनबाटै गराउन सक्ने सुविधा छ । माइ नम्बर कार्ड छ भने जापान बसाइ सहज र सजिलो हुुनेछ । बनाइहाल्ने होइन त माइ नम्बर कार्ड ।
Prevजापानमा विमानस्थलमा ओर्लिएपछि फाष्ट ट्र्याकबाट क्वारन्टिन चेकजाँच अगाडि बढाउने सम्बन्धी जानकारी
Nextओफुरोबारे केही जानकारी